दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बिओपी स्थापना | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बिओपी स्थापना
दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बिओपी स्थापना
जेठ १ गते, २०७७ - ०७:१६
पत्रपत्रिका, प्रदेश, प्रदेश न. ७, समाचार
दार्चुला । कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सडक खनेको भनेर नेपालभर भारतको चर्को आलोचना भइरहेको वेला सरकारले दार्चुलाको व्यास नगरपालिकास्थित छाङरुमा सीमा पोस्ट स्थापना गरेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – छाङरु कालापानीको अतिक्रमित भूमिबाट १२ किलोमिटर तल पर्छ । त्योभन्दा माथि नेपाली भूमि कालापानी, नावी र नावीढाङमा भारतीय फौजका आठ क्याम्प छन् ।
स्थानीय जितसिंह बोहराका घर भाडामा लिएर अहिले बिओपी राखिएको छ । बुधबार बिओपी स्थापना भएपछि छाङरुमा सशस्त्रका इन्स्पेक्टर लिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वमा २५ जनाको जनशक्ति खटिनेछ ।
तर, बुधबार भने त्यहाँ आठजनालाई मात्रै पुर्‍याइएको छ । बाँकी सिपाही बन्दोबस्तीका सामानसहित बिहीबार छाङरु उतारिने सशस्त्रको ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति डम्बरबहादुर विष्टले बताए ।
कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागमा ५८ वर्षदेखि भारतीय सुरक्षा फौजको परेड चलिरहेको छ । सन् १९६२ मा अर्धसैनिक बलको ब्यारेक स्थापना गरेको भारतले आफ्नो फौज विस्तार गर्दै अहिले सो क्षेत्रका तीन स्थानमा आठ क्याम्प खडा गरेको छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको भारतीय फौजले छाङरुभन्दा माथि जान नेपालीलाई निषेध गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालीहरू त्यो क्षेत्र जाने अन्तिम यही हो ।
सशस्त्रको बिओपी पहिलोपटक स्थापना भए पनि यो छाङरुको सीतापुलमा र त्योभन्दा १२ किलोमिटर पूर्व ९चीन० तर्फ टिंकरस्थित छियालेकमा नेपाल प्रहरीको चौकी छ । तर, हिउँदमा चिसो बढ्दै गएपछि माथिको प्रहरी चौकीका जनशक्ति तल झर्दछ ।
चिसो बढ्न थालेपछि छियालेकका प्रहरी सीतापुल आउँछन् । चिसो अझै बढेपछि दुवै चौकीका प्रहरी ४३ किलोमिटर तल राप्लाको दुम्लिङ झर्छन् । दुम्लिङमा प्रहरी नायब निरीक्षक ९सइ०को कमान्डमा प्रहरी चौकी छ ।
दुम्लिङभन्दा तल हिकिला, धौलाकोट, सुन्सेला, हुती र ब्रह्मदेवमा नेपाल प्रहरीका चौकी छन् । अझै तल सदरमुकाम खलंगामा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको एक–एक गुल्म छन् ।
यसरी कालापानीबाट १२ किलोमिटर तल छाङरु, त्यहाँबाट ४३ किलोमिटर तल दुम्लिङ पर्छ । त्यस्तै दुम्लिङबाट १३ किलोमिटर तल धौलाकोट र धौलाकोटबाट नौ किलोमिटर तल हुती र हुतीबाट चार किलोमिटर तल हिकिलामा पनि प्रहरी चौकी छ ।
हिकिलाबाट १० किलोमिटर तल ब्रह्मदेवको दुहु र दुहुबाट १० किलोमिटर तल दार्चुला सदरमुकाम खलंगा पर्छ । यसरी नेपालले दार्चुला सदरमुकाममाथि छियालेकसम्म सात ठाउँमा प्रहरी चौकी राखेको छ ।
उता भारतले भने दार्चुदा सदरमुकामपारि धार्चुलाबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रसम्म १५ स्थानमा २८ क्याम्प बनाएको छ । २० क्याम्प भारततर्फ छन् भने नेपालको कालापानी क्षेत्रको तीन ठाउँ गुन्जी, कालापानी र नावीढाङ आठ क्याम्प राखिएको छ ।
भारतको व्यापार प्रतिनिधिसमेत बस्ने गुन्जी क्षेत्रमा एसएसबी, कुमाउँ स्काउटको भारतीय सेना र सिख बटालियन तैनाथ छन् । कालापानीमा आइटिबिपी ९इन्डो–टिबेतियन बोर्डर पुलिस०, एसएसबी र भारतीय सेनाका दुई गुल्म छन् । कालापानीबाट लिम्पियाधुरातर्फ नावीढाङमा आइटिबिपी र भारतीय सेनाको एक गुल्म तैनाथ छ ।
गुन्जी, कुटी र नावी गाउँ ०१८ सम्म नेपालले जनगणना गरेको क्षेत्र हो । वरिष्ठ पत्रकार तथा सरकारका तत्कालीन अफिसर भैरव रिसालले नै ०१८ सालमा जनसंख्या गणना गरेका थिए । ती नेपाली बस्ती हुन्, तर भारतले कब्जा गरेकाले नेपाल र त्यहाँका बासिन्दाबीच संवाद अवरोध भएको छ ।
बिओपी स्थापनासँगै नेपाल प्रहरीको टोलीलाई पनि बिहीबार कार्यक्षेत्रमा पठाइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी पदमबहादुर विष्टले बताए । ‘चिसोका कारण टिंकर छियालेक र सीतापुल चौकीका प्रहरी तल झरेका थिए ।
अब चिसो कम भए पनि बाटोको समस्या हुँदा अहिलेसम्म प्रहरी पठाउन सकिएको थिएन, अब सेनाको हेलिकोप्टरबाट चौकीमा जवानहरू पठाउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जेठ १ गते, २०७७ - ०७:१६ मा प्रकाशित
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनलाई मात्र ६२ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने
काठमाडौं । भारतले अनुदानमा बिहीबार दिएको कोभिड–१९ विरुद्धको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप टेकुस्थित...
सप्तरी । सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा बिहीबार साँझ भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको...
दुई चरणको प्रदर्शनबाट सन्तुष्ट छ कांग्रेस ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमन...
लोकसेवाले साढे चार हजार पदमा विज्ञापन खोल्दा साढे चार लाख आवेदन
कोभिड महामारीले गत वर्ष ३०४ ले मात्र जागिर पाए, धेरै परीक्षा हुन सकेनन् काठमाडौं । देशमा बेरोजगारीको...
सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै दुवै प्रहरी जोखिम भत्ता नलिने निष्कर्षमा पुगे
काठमाडौं । सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका...
कोभिडविरुद्धको खोप सातै प्रदेशका ४ लाख ५० हजारलाई पुग्ने
काठमाडौं । भारतले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप एयर इन्डियाको विमानबाट बिहीबार...
नेपालीको भान्छा अचाक्ली महँगियो
काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेका बेला नेपालीको...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’...
न्यायाधीश भन्छन्, ‘बहस चुनावसम्म नलम्बियोस्’ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको...
सिरियामा माइनस २० डिग्रीमा गस्ती गर्दै नेपाली सेना
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिकहरूले मध्यपूर्वी...
बर्दीमै तास खेल्ने १४ प्रहरीलाई कारवाही